Markab Faransiis ah oo Qabtay Doon-ni Hub u soo siday xeebaha Somalia – Radio Daljir
Maarso 29, 2016 2:13 b 0
Bursaalax, 29, March, 2016-(Daljir)_Markab Dagaal oo ay leeyihiin Ciiddanka Badda ee Faransiiska waxay dooni shixnad hub u soo waday Somalia ku qabteen meel ka baxsan Badda Somalia
Wargeyska TradeWinds ee laga leeyahay dalka Maraykanka oo aan Warkan ka soo xiganay ayaa qoray inay Ciiddanka Faransiiska qabteen Doonidaasi, kadib, markii ay ka shakiyeen, kuna joojiyeen meel ka baxsan Badda Somalia.
Wargeyska oo soo xigtay Sarkaall ka tirsan Shirkad Maraykan oo u qaabilsan dhinaca Baaritaanadda ayaa waxa uu si kooban u sheegay in Ciiddanka Faransiiska oo adeegsanayo Diyaaradaha Helikoptarka ku dul-dageen Doonida hubka waday, waxayna baaritaan kadib ka heleen shixnad hub ah oo la sheegay in loo soo waday Xeebaha Galmudug.
Sarkaalka faahfaahin kale ma bixinin, lamana sheegin tiradda hubka saaran Doonida, halka ay asal ahaan ka soo shiraacatay iyo cidda ay u rarnayd.
Qabashaddan ayaa timid, iyadoo ay Maamul-gobaleedyadda Galmudug iyo Puntland ay dagaal la galeen Alshabaab soo gaaray Deegaano ka tirsan Maamuladaasi oo ku teedsan dhinaca Xeebta.
Doonida ay Ciiddanka Faransiiska ku qabteen meel ka baxsan Xeebaha Bariga Somalia ayaa ah Doonidii Labaad oo hub u soo waday Somalia oo wax ka yar 3 isbuuc lagu qabtay meel ka baxsan Xeebaha dalka Somalia.
Bilowgii bishan, Marakab dagaal oo laga leeyahay dalka Australia waxay qabteen Dooni shixnad hub u soo waday Somalia, xilli ay maraysay meel 195 mayl ka baxsan Xeebta dalka Cumaan.
Doonidaasi ayaa la sheegay in laga helay hub lagu qiimeeyey in ka badan Labo million oo Dollar.
Sidoo kale, Ciiddanka Badda ee Maraykanka ayaa xaqiijiyey in doonidaasi ka soo shiraacatay Xeebaha dalka Iiraan.
Afhayeenka Ciiddanka Badda Maraykanka, Ian McConnaughey waxa uu tilmaamay inay Doonidaasi waday ku-dhawaad 2,000 oo qoryaha AK 47, 100 Gantaalladda garabka laga rido ee Baasuukaha, 50 Qoryaha PKM iyo Hoobiyayaal.
Badmaaxiinta la socotay doonidaasi ee ay Ciiddanka Australia qabteen bilowgii bishan Maarso ayaa u wada dhashay dalka Iiraan, waana la sii daayey markii ay Mariniska Australia kala wareegeen rarka hubkii ay wadeen.
Si kastaba ha ahaatee, Xiriirka Dowladaha Somalia iyo Iiraan oo xumaaday darteeda ayaa loo aaneynayaa inay Dowladda Iiraan ku dhiiratay inay shixanado hub ah u soo dirto Somalia, si ay qeyb uga noqoto Ammaan-xumida iyo Colaadaha ka socda qeybo ka mid ah dalka Somalia.